Xog: Caqabadaha hortaagan in Garoonka Muqdisho uu habeenkii shaqeeyo. Miyeeysan ka warhayn Caqabadahan Dawladdu,? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 30, 2017
Wasiirka Gaadiidka Cirka iyo dhulka Xukuumadda Soomaaliya, Maxamed C/llaahi Salaad Oomaar ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha Muqdisho uu wixii hada ka dambeeya shaqeyn doono 6-da subaxnimo illaa 10-ka habeenimo. isagoo u sababeeyay arrintaasi inay dhamaystireen Nalalka ifiya Dhabaha ay Diyaaraduhu ku ordaan ee Muqdisho.
Caqabadaha hor taagan in Garoonku Habeenkii shaqeeyo.
Wasiirka u hadlay Dawladda Somalia waxa uu muujiyay Dadaal iyo siday uga go’an tahay Dawladda uu ka midka yahay in Garoonka uu shaqeeyo Habeen iyo Maalin, laakiin waxaa jira Caqabado ay Wasiirka iyo Dawladaba iska indha tirayaan oo aan suurtagal ka dhigay in Garoonku habeenkii shaqeeyo.
Caqabadda ugu wayn ayaa ah AMISOM iyo Sirdoonka dagan Xalane oo tiro ka dhawr jeer is hortaagay in Garoonku uu habeenkii shaqeeyo, Waxayna u sababayeen dhawr arrimood oo kala ah:
1-Inaan la damaanad qaadi karin Ammaanka Diyaaradaha iyo Rakaabka habeenkii isticmaalaya Garoonka oo ay suuragal tahay inay duqeeyaan Alshabaab oo habeenkii imaan kara Masaafo u dhow Garoonka dhinaca Jaziira.
2-Dhaqdhaqaaqa Gudaha Garoonka oo habeenkii ay dhici karto in loogu soo dhex dhuunto, halkaasna ay qatar amni ka imaan karto.
3-Diyaarado Milatari oo Habeenkii isticmaala Garoonka, taasoo aysan oggolayn inay Shacabku oggaadaan Dhaqdhaqaaqa Diyaaradahaasi.
4-Isgaarsiinta laga hago Diyaaradaha Garoonka Muqdisho ka soo dagaya oo ay Habeenkii ku shaqeeyeen Shaqaale ka tirsan Shirkadda Bankraft ee caawisa AMISOM, iyadoo aan la oggolayn in Diyaaradaha Milatariga ay hagaan Shaqaalaha Soomaalida ah.
ka sakoow Sababaha ay Daliishadaan Taliska Xalane waxaa jira Caqabado kale oo muuqda, kuwaas oo ay dhici karto in Dawladdu iska indha tirayso ama aysan ka baaraan dagin.
Caqabadda ugu wayn ayaa ah waxaa ku teedsan Garoonka Xarumo ay ka suran yihiin Anteenooyin oo ay leeyihiin Shirkadaha Isgaarsiinta, Hay’ado Caalami ah iyo AMISOM, dhamaantoodna ma lahan Astaan muujinaysa inay Anteeno tahay, waxaana ka dhalan kara Qatar wayn oo sababi karta in Diyaaradu ay burburto, halkaana ku baaba’aan Rakaabka saaran.
Naqshadda Garoonka Muqdisho.
sidoo kale Habeenkii Garoonka Muqdisho iyo Goobaha u dhow waa meelo ay xakamaysan yihiin Dhaq dhaqaaqoodu, waxayna Caqabad ku noqonaysaa Shacabka isticmaalaya Garoonka oo aan helayn Qaraabo iyo Gaadiid ka kaxeeya Garoonka.
Garoonka Muqdisho ma lahan Shaqaale ku filan oo Habeen iyo Maalin qaban kara Shaqooyinka loo baahan yahay, iyadoona Dhaqaalaha ka soo xarooda Garoonka aysan 20% dib ugu laaban Garoonka oo ay aadaan meelo kale, waxayna taasi ku keeni kartaa habacsanaan Amni iyo mid shaqo.
Markii la qarxiyay Diyaaradda Daallo waxay Khuburadii baaraysay waydiiyeen Shaqaalaha ka shaqeeya Mashiinadda wax lagu baaro saacadaha ay shaqeeyaan, waxayna la yaab ku noqotay markii ay u sheegeen inay ku shaqeeyaan Qalabkaasi ugu yaraan 9 Saacadood oo Xiriir ah, taasoo ka dhigaysa inay meesha ka baxdo inay yeeshaan Feejignaan dheeriya oo Amni, iyadoona sida caadiga ah Qalabka wax lagu baaro loogu talagalay in 1-kii Saacba ay 2 Qof ku shaqeeyaan si ay qof u noqoto mid dhug u leh Shaqadda ay qabanayso oo ah Muraayadda laga arki karo Tayadda Garoonka iyo inuu la jaanqaadi karo Garoomadda Caalamiga ah.
hadda oo ay Shaqadu noqotay Habeen iyo Maalin, ma jiro Shaqaale cusub oo loo tababaray ku shaqaynta Qalabka wax lagu baaro, sidoo Kale Eeyaha uriya Qaraxyadda ee wax lagu baaro Garoonka waa 9 Eey, iyaguna awood uma lahan inay shaqeeyaan Habeen iyo Maalin. Waxayna Caqabadahaas oo dhan Calaamad Su’aal galinayaan sida Garoonka Muqdisho uu u shaqayn karo Habeen iyo Maalin, iyadoona haddii ay Dawladda Somalia ku adkaysato Go’aanka ah in Garoonku uu Habeen shaqeeyo ay imaan karto Ceebo badan iyo Khasaaro.
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde wixii ka dambeeyay Burburkii Dawladii dhexe ee Somalia ma aysan isticmaalin Habeen Diyaaradaha Shacabku. Waxaase Habeenkii isticmaala Diyaarado Ciidan oo keeni Qalab Ciidan, iyo Sahay.
Maxkamadda Sare ee Ciidanka oo Xukun ku riday Askarigii loo haystay Dilkii Wasiir Siraaji.